Ahlu-suna: 20 shabaab ah ayaan dilnay | KEYDMEDIA ONLINE
Ahlu-suna: 20 shabaab ah ayaan dilnay
DHUUSAMAREEB(KEYDMEDIA)Ahlu-suna waljamaaca ayaa sheegtay in dagaal ka dhacay degmada dhuusamareeb ee gobalka Galgduud ayna soo qaadeen Al-shabaab ay ku dileen 20 ka tirsan Shabaab ayna dhaawaceen kuwa kale.
Xoghayaha warfaafinta ahlu-suna ee gobalada Dhexe C.llaahi Axmed Samatar ayaa u sheegay warbaahinta in dagaalkii shalay ilaa xalay ka dhacay dhuusamareeb ay qasaara xoog leh ku geersiiyeen Shabaab.
Waxa uu hoosta ka xariiqay Mr Samatar in mar walba oo ay dagaalamaan labada dhan Shabaab ay la kulmaan Jab xoog leh taasoo uu ku macneeyay awoodooda oo sii xumaaneysa marba marka ka danbeysa.
Afhayeenka Shabaab C.casiis muscab ayaa sheegay in ay iyana guula gaareen isla markaana ay dagaalkii dhacay gacanta sare iyagu ku lahaayeen isagoona intaas ku daray in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku qaadayaan ahlu-suna waljamaca.
Ila madax banaan oo deegaanka ah ayaa sheegay in labada dhan ee dagaalantay uu gaaray qasaaro isku mid ah isla markaana aan la dhihi karin koox gaar ah ayuu qasaaraha ku xoog badnaa.